Diseembar 6, 2021, toddobaadyo uun ka dib markii McKnight Foundation uu ku dhawaaqay sida ay nooga go'an tahay gaaro eber saafi ah Dhammaan deeqahayada, Tonya Allen waxay ku biirtay Golaha Aasaaska iyo hoggaamiyeyaasha kale si ay ugala hadlaan sida aasaaska u eegi karaan wax ka baxsan deeq-bixinta si ay si buuxda ugu adeegaan hawlgalladooda iyada oo loo marayo maalgelintooda deeqaha.
Kathleen Enright, madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda Golaha aasaasiga ah, dhexdhexaadin doodda Tonya, Valerie Red-Horse Mohl, CFO of East Bay Community Foundationiyo John Palfrey, madaxweynaha iyo madaxa fulinta Macallin Macallin.
Kuhadlayaashu waxay wadaageen fikrado laga helay khibradahooda maalgashiga xalinta cimilada iyo shaqaaleysiinta maareeyayaasha maalgelinta kala duwan. Hoos waxaa ah waxyaabaha muhiimka ah ee la qaadanayo.
RAADINTA ISKU JIDKA
Tonya Allen: "Haddii deeqdayada, taas oo ah 95% ee hantidayada, ay ka shaqeyneyso lid ku ah yoolalka barnaamijka, markaa waa na garaaci doonaa ka hor inta aanan xitaa gelin xafiiska si aan u bixino deeq."
"Si aan u niraahno si kale, waa inaan ku jirnaa si toos ah, sababtoo ah haddii aanaan ahayn markaa waxaan wiiqeynaa dhammaan wanaagga aan isku dayeyno inaan gaarno," Tonya ayaa sii waday. "Saaxiibkeena Darren Walker oo ka socda Ford Foundation ayaa sheegay markii ay dhawaan sameeyeen ka go'an in la leexiyo faylalka ay ku jiraan, 'Waa maxay ujeedada daa'imnimada haddii aadan lahayn meeraha?' Isla markiiba waxaa ku yaal hoos u dhac makarafoon. Aad bay u adag tahay, sababtoo ah madaxdeenna ma gelin karno arrintan, waxaanan ognahay in tani aysan ahayn isbeddel barnaamij, runtii waa isbeddel bulsho."
Tonya Allen: “Net eber waa hab dhamaystiran oo loo maareeyo maalgashiga McKnight. Waxaan ka baari doonaa gees kasta oo ka mid ah deeqdayada si aan u sii deyno."
"Waxaan rabnaa inaan hoos u dhigno qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee dhammaan faylalka maalgashiga, waxaana dooneynaa inaan fiiro gaar ah u yeelano shidaalka fosil," Tonya ayaa sii waday. “Laakin meesha kuma joogno, taasi waa waxa dhabta ah ee ka go'naanta ebernimada. Waxaan sidoo kale rabnaa inaan u dirno calaamad suuqa in ay jirto rajo ah in ay kaarboonka ka saaraan boorsooyinkooda. Waa inaan sidoo kale maalgelin ku samaynaa shirkadaha naga caawinaya abuurista dhaqaale aan kaarboonka lahayn. Baaxadda dhibaatada cimiladu waxay u baahan tahay inaan qaadno tallaabo geesinimo leh oo ula kac ah. Waxaan nahay hal aasaas. Haddii aan isku geyno dadaalladayada dhanka samafalka waxaan kor u qaadi karnaa horumarkayaga si aan u helno bulsho iyo dhaqaale adkaysi leh oo ka xor ah kaarboonka."
Val Red-Horse Mohl: "Sinaanta jinsiyadeed iyo kala duwanaanshiyaha ayaa qayb ka ahaa dhismaha Aasaaska Bulshada Bariga Bay tan iyo markii aan bilownay."
"Waxaan rabnay inaan gaadhno isku xirka 100% ee dhammaan maalgashiyadayada. Waxaan ku helnay darajooyin aad u sarreeya barnaamijyadayada iyo deeq-bixintayada-waxaanu haynaa barnaamijyo cajiib ah oo taageera ururada uu hogaamiyo Madoow. Tirakoobka ka dhigaya afkayga inuu hoos u dhaco ayaa ah in 98% ee hantida maaliyadeed ee adduunka ay maamulaan niman caddaan ah. Waxaad bilaabaysaa inaad ogaato, 'Ma cunsuriyad baa mise waa nidaam u baahan in wax laga beddelo?' Waxay noqon kartaa xoogaa labadaba. Waxa aan sameynay ee aan rajaynayo in lagu soo celin karo waa in aan kala saarno khatarta dib loo qeexay iyo sida aan u eegno xulashada maamulayaasha. Waxaa jiray ismaandhaafkan muddo tobanaan sano ah in si aad u maal gashato sinnaanta jinsiyadeed ama saameyn ay tahay inaad qaadato nooc ka mid ah soo celinta tanaasulka, taasina kama fogaan karto runta. Hadda dhammaan lacagta aan ku maalgelinay maamulayaasheena kala duwan ayaa ah lacagaha ugu waxqabadka badan. Maamulayaasheena kala duwan waxay muujinayaan inaan sameyn karno lacag oo aan sameyn karno wax sax ah isku mar."
John Palfrey: "MacArthur waxa uu ka leexanayaa shidaalka fosil isla mar ahaantaana aanu raadinayno in aanu si degdeg ah u maalgashano tamarta nadiifka ah iyo xalalka loo siman yahay."
"Waxaan u maleyneynaa inuu jiro ballanqaad weyn oo taas la sameeyo. Qaybta kale ee toosinta gardarada ah ee aanu samaynayna waa anagoo eegayna maamulayaasha hantidayada iyo in xoogga la saaro boqolkiiba inta ay hoggaamiyaan dadka midabka leh iyo dumarka iyo in tiradaas loo soo qaado si feker iyo tixgelin leh. Ma aha oo kaliya inaad tan samayn karto, waxaad heli kartaa soo celin isku mid ah haddii aysan ka fiicnaan. Markaa haddii qof uu ka walwalo waajibaadkooda aaminka ah, anigu kama ihi - marka la eego samaynta la jaanqaadida deeqaha MacArthur. "
MAXAY QAADAN DOONAA?
Tonya Allen: "Waxaan rabnaa in dadku fahmaan in tani ay tahay ballanqaad waqti dheer ah."
"Sawirka ugu weyn ee halkan ku yaal ayaa ah in tani aysan ahayn wax aad bilowdo oo ay habeen isku beddesho. Midna maaha oo la sameeyay. Ma aha faal. Tani waa inay dhab ahaantii noqotaa habka aan u qabaneyno shaqadeena horay u socota, waana inaan nafteena ku bixinaa waqti iyo tamar si aan dib u habeyn ugu sameyno nidaamyada iyo habka si shaqadu ay tahay mid waara, maaha mid soo noqnoqonaysa."
"Marka la joogo McKnight himiladeenu waa inaan horumarinno cadaalad badan, hal abuur leh, mustaqbal badan halkaas oo dadka iyo meeraha ay ku koraan. Markii aan dib u cusboonaysiinay hadafkeena 2019 waxaan sidoo kale dhisnay go'aankeena ku aaddan cimilada iyo sinnaanta jinsiyadda. Labadaas goobood ayaanu maalgashi qoto dheer ku samaynay. Waxa kale oo aan isku dayey in aan sameeyo tan iyo imaanshahayga waxa ka mid ah in aan labadan shay uun diiradda saarno sida cinwaannadayada, balse ay noqdaan halbeegyada shaqo ee dhinac walba ah. Waa inaan noqono u doodeyaal iyo ujeedo dhaqaajiya dhaqdhaqaaq kasta oo aan samayno."
"Natiijadaas awgeed, waxaan awoodnay inaan ka dhisno aasaaska taariikhda xooggan ee maalgashiga howlgalka. Waxaan hadda ku saabsan $500 milyan oo ay ka go'an tahay maalgashiga saamaynta guud iyo kuwa gaarka ah kuwaas oo bixiya fikradaha, tignoolajiyada, software-ka, iyo adeegyada si dhaqaalaha looga saaro. Sida aan shaqadan u qabanay todobadii sano ee la soo dhaafay, 40% ee $3 ee deeqdeena hadda waxay leedahay nooc ka mid ah isku-habaynta hadafka iyo maalgelintayada saamaynta aan la xaddidin. Waxaan u maleynayaa in waxaas oo dhan ay ka mid yihiin sababaha ay guddiga u suurtagashay in ay go'aan ka gaaraan eber eber. Waxay ahayd tillaabada xigta ee macquulka ah si aan hantideenna si buuxda ula jaanqaadno hadafkeenna isbeddelka cimilada."
John Palfrey: “Marka hore, kaliya bilow. Marka labaad, ogow in ay tahay wax la samayn karo."
"Ka bilow waxbarashada," ayuu yiri Val Red-Horse Mohl. "Waxbarashada ku saabsan erey-bixinta, waxbarashada ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay bayaanka siyaasadda maalgashiga iyo waxa ujeedadu tahay. Haddii aad awooddo, tani ka dhig hadafka qof shaqaale ah, ma aha oo kaliya lataliyeyaasha dibadda."
"Guddigayagu waxa uu la legdamay inta ugu badan iyada oo ah aasaaska labaad si loo sameeyo ballan eber saafi ah," Tonya ayaa ku daray. "Waqti ayaan la qaadanay guddigayada oo aan la hadalnay machadyo kale oo sameeyay go'aan eber saafi ah - sida deeqaha Harvard iyo Jaamacadda Michigan. Waxa ay guddidu ka maqleen ee ay ku qanceen ayaa ah in aanay jirin waddo cad, balse dhammaanteen waxa naga go’an in aan isla garanno. Ka dibna haysashada kartida guriga iyo xogta si aad u ogaato halka aad ka bilaabayso.
Tonya Allen: "Ma dhayalsan karno awoodda u doodista saamiley ahaan iyo la-taliyeyaal."
"Mid ka mid ah mabda'ayada guud ahaan faylalkayaga waa inaan yeelano firfircoonida saamilayda," Tonya ayaa xustay. "Ka muuqo wada hadaladaas. Tani waxay ku saabsan tahay doorkayaga u doode ahaan sida deeqadeena loogu isticmaalo in lagu taageero ama lagu wiiqo himiladeena. Waa inaan sidoo kale riixnaa la-taliyayaashayada. Kor u qaad mawduucyada. Kaliya maaha waxa aan ku samayno faylalka. Inta badan ee la-taliyayaashu isbedelayaan, ayaa kala duwanaansho badan iyo cimilo adkeysi u yeelan doona doorashooyinkeena iyo faylalkayaga."
NATIIJADA LA SOCODKA
Tonya Allen: "Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan saddex shay: saamaynta, soo noqoshada, iyo barashada."
"Waxaan helnaa warbixin sanad walba ina tusisa saameynta dhabta ah ee aan ku yeelaneyno dhinacyo badan marka laga reebo soo celintayada maaliyadeed. Waxaan sidoo kale tirinaa saameynta waxbarashada. Waxaan ognahay marka aan samaynayno maal-gashiyadan isku xidhan, waa in aan wax ka baranno dhinaca barnaamijkeena. Sababtoo ah waxaynu ognahay inaynu u baahanahay in aynu fahano sida hawl-wadeenada dhaqaaluhu u shaqeeyaan, horumarkooda iyo sida loo bedelo loona bedelo si deeq-bixinteena ay u noqoto mid kaabaya maal-gelinta dhaqaale iyo in maal-gashiyadaas deeqaha ahi ay u noqdaan kuwo kaabaya deeq-bixintayada.”
Tonya Allen: "Waxaan rabnaa inaan sii qoto dheereyno dhaqankeena oo aan wadaagno."
"Waxaan sameynay ballanqaadkan eber ah waxaanan isku dayeynaa inaan kobcino maal-gelintayada maareeyayaasha maaliyadda ee kala duwan. Waxaan rabnaa inaan si dhab ah ugu wanagsanno labadaas shay oo aan ka dhigno mid la heli karo si aan u siino taageerada kuwa kale ee goobta jooga ee doonaya inay sameeyaan boodbood. Dhammaanteen waxaan ku wada jirnaa tan-tani maahan cidda koowaad iyo kan labaad (iyo habka, David Rockefeller Fund wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee eber). Ma aha ilaa intaynu keligay aadi karno, ee waa inta aynu wada socon karno.”
Helitaanka Ilaha Dhacdada & Duubista